Imagen: Gcina, Lawula, kwaye uLungelelanise iVidiyo kunye noMxholo weMithombo yeendaba e-Rich kule DAM ye-Agile | Martech Zone
Imagen: Gcina, Lawula, kwaye uLungelelanise iVidiyo kunye noMxholo weMithombo yeendaba e-Rich kule DAM ye-Agile
Lwesine, Matshi 18, 2021 Lwesine, Matshi 18, 2021 Douglas Karr
Ulawulo lweeasethi zeDigital (DAMamaqonga sele ejikeleze ngaphezulu kweshumi leminyaka, esenza ukuba iinkampani ezinkulu zigcine, zilawule, ziququzelele, kwaye zisasaze iifayile zazo zemithombo yeendaba ezivunyiweyo. Nantsi ividiyo ecacisayo yokuba i-Imagen inceda njani iimveliso ukuba zenze ngcono kwaye zilawule iiasethi zazo:
Imagen ibonelela ngeemveliso ezimbini ze-DAM:
Iqonga lolawulo lweasethi yedijithali yokugcina kunye nokuhlela yonke ividiyo kunye nomxholo osisityebi. Iyafikeleleka ukude kuso nasiphi na isixhobo esiqhagamshelekileyo ukuze umake, wabelane, uchaze, kunye nokunye.
Iimpawu zeImagen Go zibandakanya:
yoGcino -Tsala kwaye ulahle ifayile okanye ulayishe kwifolda kuso nasiphi na isixhobo esiqhagamshelwe apho unokuthega, uchaze, kunye nokunye.
ukufuna -Ukukhangela ngokukhawuleza nangokuchanekileyo okunceda amaqela akho okudala okanye abathengi ukuba bafumane ngokulula iiasethi abazifunayo.
UkuMakisha okuzenzekelayo -Ichitha ixesha elincinci kunye ne-AI tagging eyenza umxholo wakho ubelula ukuyifumana ngophendlo lwamagama alula.
Ukudibana -Mema amaqela ukuba asebenzisane, aphonononge, azise kwaye avume umxholo. Unokumakisha-kwiindawo ezithile kwiividiyo nakwimifanekiso.
Ukunciphisa umthwalo wolawulo lwefayile, ukusebenzisa impahla ngokufanelekileyo, ukuhambisa amaphulo ngokukhawuleza, kunye nokuqinisekisa ukungqinelana kweempawu.
Imagen yiya kuvavanyo lwasimahla
Ijolise kwiinkampani zemidlalo kunye neendaba, i-Imagen Pro liqonga lolawulo lwevidiyo elikrelekrele elikunceda ukuba uququzelele umxholo wakho onzima, ukukubeka ngokuqinileyo kulawulo. Gcina, khangela, jonga, usasaze kwaye ulawule umxholo wakho ngokulula, kwaye uvule ixabiso, ukusuka kuphawu lwakho ukuya kumgca wakho osezantsi.
Iimpawu zeImagen Pro zibandakanya:
Ivenkile - Ividiyo, imifanekiso, iaudiyo, amaxwebhu, kunye nemithombo yemidiya yoluntu egcinwe ngokukhuselekileyo, ifikeleleka ngokulula.
fumana -Fikelela kugcino lwakho lonke lweendaba ngokulula. Ukungena ngaphakathi kunye nezixhobo zolawulo kuthetha ukuba iphothifoliyo yakho icwangcisiwe, ikhonjisiwe kwaye ilungele ukudlala.
View -Imagen Pro ingena ngokungenamthungo kwishishini lakho. Lungiselela amava omsebenzisi kubaphulaphuli bakho. Yenza iqonga ngokwezifiso, wenze ingeniso, kwaye uphucule imbuyekezo kutyalo-mali kwindawo yakho yokugcina.
Lawula -Vula amandla evidiyo yakho ngezixhobo zolawulo ezikrelekrele ezikuvumela ukuba ulawule, ucwangcise, wabelane, uhlalutye kwaye ulawule indawo yakho yokugcina.
Hambisa Nokuba ujonge kwimfuno, usasaza ngqo, okanye uhambisa iifayile ezilungele ukusasazwa, i-Imagen Pro idibanisa abaphulaphuli bakho nomxholo abayifunayo-ngesantya esikhawulezayo.
Imagen ikwabonelela ngesityebi API ukudibanisa ngokupheleleyo iimveliso zabo kwiqonga lakho leshishini.
tags: idama eligugileyoaiukumakisha okuzenzekelayoI-autotagukuqhuba ngokuzenzekelayoidamaUlawulo lwee-asethi zedijithaliucingaimagen hambaumfanekiso proUlawulo lwezityebiezemidlaloUlawulo lweeasethi zevidiyo
I-Agorapulse: I-Inbox yakho elula, edityanisiweyo yoLawulo lweMidiya yoLuntu